ပေါင်မြို့နယ်က ဆရာမတစ်ယောက် မသေင့်ပဲသေရပြန်ပြီ သေမင်းရယ် ခင်ဗျား အကောင်းကြိုက်လှပါလားဗျာ – CharTake
ပေါင်မြို့နယ်က ဆရာမတစ်ယောက် မသေင့်ပဲသေရပြန်ပြီ သေမင်းရယ် ခင်ဗျား အကောင်းကြိုက်လှပါလားဗျာ
chartake | November 20, 2019 | Local News | No Comments
လူမှန်ရင် သေမျိုးဆိုတာသိပေမယ့် တခါတလေမှာ သေမင်းက သိပ်အကောင်းကြိုက်တက်တာ သတိထားမိခဲ့တယ်။ရပ်ကွက် မြို့ ရွာ နိုင်ငံထဲမှာ ဆိုးပေပြီး မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကြ သိပ်ကို အသက်ရှည်ကြတယ် ကောင်းတာလုပ်ပြီး လူတိုင်းတန်ဖိုးထားရတဲ့သူကျ ခေါ်သွားတာ မြန်လိုက်တာ။အခုလည်းကြည့်ပါအုံး
အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးရသူတွေအတွက် ကာယကံရှင်နဲ့ ပတ်သက်သူတွေကလည်း ရင်ကျိုးရသလို သူဟာသူများအကျိုးကို ထမ်းရွက်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူနဲ့ ပတ်သက်ရသူတွေကလည်း ကြေကွဲမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်….တိုင်းပြည်အတွက်လည်း အနာဂတ်ကြယ်တစ်ပွင့်ကြွေလွင့်ရသလိုပါပဲ…ခုလည်းပဲ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတဲ့ ဆရာမလေးတစ်ဦးဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကြွေလွင့်ခဲ့ရပါတယ်…ဖြစ်စဉ်ကတော့ အသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်မောင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ တိုက်မိပြီး ဆရာမလေး ဒေါ်မျိုးမျိုးလွင် တစ်ယောက် သေဆုံးခဲ့ရရှာပါတယ်။ဆရာမလေးက ပေါင်မြို့နယ် ကော့ကဒိုက် အ.မ.က ( ရေတွင်းကုန်း) က ဆရာမလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်…. ဆရာမလေး ခုလို မမျှော်လင့်ဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ရလို့ တပည့်တွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကလည်း အရမ်းဝမ်းနည်းနေရတာပါ။
တိုက်မိတဲ့ကလေးကလည်း ၁၃ နှစ်ဆိုတော့ ဒီအရွယ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို စိတ်ချလက်ချပေးမောင်းတဲ့ မိဘတွေရဲ့ စိတ်ကိုလည်း နားမလည်ပါဘူး….အရွယ်မရောက်သေးသူတစ်ယောက်ကြောင့် အချိန်မတိုင်ခင် ဆရာမလေးတစ်ဦးကြွေလွင့်ခဲ့ရတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက်ပါနစ်နာပါတယ်…ဒီလိုအဖြစ်အပျက်လေးကို သင်ခန်းစာယူရင်း ဆိုင်ကယ်မောင်းသူတွေကလည်း ဗရမ်းဗတာ မမောင်းဖို့လိုပါတယ်…ခုတော့ ကြွေလွင့်သွားရှာတဲ့ ဆရာမလေးအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲရသလို ဆရာမလေးကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ပဲ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။credit: Writer – HW (Shwe Yaung Lan) စာဖတ်သူတို့ ဘေးဘယာဝေးကွာပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။unicode လူမှနျရငျ သမြေိုးဆိုတာသိပမေယျ့ တခါတလမှော သမေငျးက သိပျအကောငျးကွိုကျတကျတာ သတိထားမိခဲ့တယျ။ရပျကှကျ မွို့ ရှာ နိုငျငံထဲမှာ ဆိုးပပွေီး မကောငျးတာလုပျတဲ့သူတှကွေ သိပျကို အသကျရှညျကွတယျ ကောငျးတာလုပျပွီး လူတိုငျးတနျဖိုးထားရတဲ့သူကြ ချေါသှားတာ မွနျလိုကျတာ။အခုလညျးကွညျ့ပါအုံး
အရှယျမတိုငျခငျသဆေုံးရသူတှအေတှကျ ကာယကံရှငျနဲ့ ပတျသကျသူတှကေလညျး ရငျကြိုးရသလို သူဟာသူမြားအကြိုးကို ထမျးရှကျနသေူဖွဈတယျဆိုရငျ သူနဲ့ ပတျသကျရသူတှကေလညျး ကွကှေဲမဆုံးဖွဈရပါတယျ….တိုငျးပွညျအတှကျလညျး အနာဂတျကွယျတဈပှငျ့ကွှလှေငျ့ရသလိုပါပဲ…ခုလညျးပဲ အသကျအရှယျအားဖွငျ့ ငယျငယျလေးရှိသေးတဲ့ ဆရာမလေးတဈဦးဟာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရပါတယျ…ဖွဈစဉျကတော့ အသကျ ၁၃ နှဈသာရှိသေးတဲ့ ကလေးတဈယောကျမောငျးလာတဲ့ ဆိုငျကယျနဲ့ တိုကျမိပွီး ဆရာမလေး ဒျေါမြိုးမြိုးလှငျ တဈယောကျ သဆေုံးခဲ့ရရှာပါတယျ။ဆရာမလေးက ပေါငျမွို့နယျ ကော့ကဒိုကျ အ.မ.က ( ရတှေငျးကုနျး) က ဆရာမလေး တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ…. ဆရာမလေး ခုလို မမြှျောလငျ့ဘဲ သဆေုံးသှားခဲ့ရလို့ တပညျ့တှနေဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တှကေလညျး အရမျးဝမျးနညျးနရေတာပါ။
တိုကျမိတဲ့ကလေးကလညျး ၁၃ နှဈဆိုတော့ ဒီအရှယျနဲ့ ဆိုငျကယျကို စိတျခလြကျခပြေးမောငျးတဲ့ မိဘတှရေဲ့ စိတျကိုလညျး နားမလညျပါဘူး….အရှယျမရောကျသေးသူတဈယောကျကွောငျ့ အခြိနျမတိုငျခငျ ဆရာမလေးတဈဦးကွှလှေငျ့ခဲ့ရတာဟာ တိုငျးပွညျအတှကျပါနဈနာပါတယျ…ဒီလိုအဖွဈအပကျြလေးကို သငျခနျးစာယူရငျး ဆိုငျကယျမောငျးသူတှကေလညျး ဗရမျးဗတာ မမောငျးဖို့လိုပါတယျ…ခုတော့ ကွှလှေငျ့သှားရှာတဲ့ ဆရာမလေးအတှကျ ဝမျးနညျးကွကှေဲရသလို ဆရာမလေးကောငျးရာမှနျရာရောကျပါစလေို့ပဲ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။credit: Writer – HW (Shwe Yaung Lan)
စာဖတျသူတို့ ဘေးဘယာဝေးကှာပွီး ကိုယျစိတျနှဈဖွာကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစေ။
တက္ကစီကားသမားခေါ်တင်သွားပြီး ကလေးပျောက်နေလို့ ကူညီရှာပေးဖို့ မိဘတွေ အကူညီတောင်း
ဂိတ်ကြေးတောင်းရာတွင် နှစ်ဖက်ညှိမရ၍စိတ်ဆိုးပြီး သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်တဲ့ရဲကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီ
ကွမ်းခြံထဲတွင်အသတ်ခံရသော နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု့ တရားခံမိပြီဟု သတင်းရ